20 talooyin oo ku saabsan qaabeynta xayeysiin wanaagsan | Abuurista khadka tooska ah
20 talooyin oo ku saabsan qaabeynta xayeysiin wanaagsan
Xayeysiin kasta waa naqshad iyo ugu dambeyn hadal. Xayeysiinta iyo naqshadeynta garaafku waxay wadaagaan qayb wanaagsan oo ka mid ah astaamaha, shaqooyinka iyo ujeeddooyinka. Taasi waa sababta tayada iyo waxtarka xayeysiiska shaqsiyeed iyo qaabeynta ay kuxirantahay arrimo aad iskula mid ah. Mararka qaar waxaan kula wadaagnay qaar ka mid ah talooyin ka yimid xirfadlayaal waawayn oo ka socda baloog-dhiggeenna laakiin weligeen kuma toosin xayeysiinta.
Taasi waa sababta maanta aan jeclaan lahaa inaan kula wadaago wax intaa ka badan iyo wax ka yarba 20 talooyin oo ku saabsan qaabeynta taasina waxay kaa caawin doontaa inaad yeelato fikrado ku saabsan horumarinta xayeysiinta muuqaalka ah:
Fikrad ka qabo: Qaab dhismeedka muuqaalku wuu fiicnaan karaa oo waxaan leenahay halabuur tayo sare leh marka la eego bilicsanaanta, laakiin runta ayaa ah in waxaas oo dhami ay noqon karaan qiiq qiiq marka jimicsigeena ka dambeeya ay jiraan qoraal qoraal ah. Sababtaas awgeed, aad ayey muhiim u tahay in ka hor naqshadeynta xayeysiintayada aan qaabeyno fikradeena.
Wadahadalku ma qurxin: Qurxinta waxay muujineysaa qurxinta qiimaha kharashka shaqeynta. Waxay ku saabsan tahay daboolida hawlo taxane ah iyo sida ugu macquulsan uguna habboon ee suurtogalka ah. Haddii aad ka shakido muhiimadda cunsur, ka saar halabuurkaaga.
Adeegso hal luuqad oo muuqaal ah: Waxa ay ku saabsan tahay ayaa ah in aqbalahayagu qabsado farriinta sidaa darteedna waa inaan la shaqeynaa ilaha la fahmi karo ee ka sarreeya dhammaan.
Isticmaal kaliya laba nooc ama ugu badnaan saddex, in ka badan ayaa u horseedi kara dhibaatooyin faham.
Codso labada-feer: Adeegso walxo si hubaal ah u soo jiidan kara dareenka oo soo jiidan kara dareenka. Waxay ku imaan kartaa cunsurro waaweyn ama xitaa kicin kara muran. Sidan oo kale, marka ugu horeysa, waxaan bilaabi doonnaa jaleecooyin haddii aan geesinimo leenahay waxaan maamuli doonnaa inaan sii wadno feejignaantaas oo kuwa raacaya ayaa sii wadi doona akhrinta qoraalkayaga.
Dooro midabyo ujeeddo leh: Labada nooc iyo midabbo, qaababka, jilayaasha iyo dejintu waa inay lahaadaan sabab. Ka fogow kala sooca, raadso xirfad iyo wada noolaansho.
Haddii aad ku sameyn karto wax ka yar, ka dib u tag!
Meel madhan waa sixir, waa inaad abuurtaa oo aadan buuxin. Si kastaba ha noqotee, waxa meelaha cufan yar ay na siinayaan waa raaxo. Sidan oo kale, isticmaaluhu wuxuu ku dhex wareegi karaa hadalka isagoo leh xasilooni buuxda iyo qummanaan.
Ula dhaqan qoraalka sidii sawir, waa cunsur ahmiyad siman leh. Waa wax soo noqnoqday laakiin dhab ah, qaab qoraalka ayaa aad muhiim u ah waana inuu dhahaa xitaa in ka badan qoraalka laftiisa.
Qaab qoraalku wuxuu noqdaa mid saaxiibtinimo leh oo keliya markaan ka dhigno saaxiibtinnimo. Tani waxay ka dhigan tahay in fikradda, dejinta ama midabbada ay tahay inay wadaagaan sifooyinka, astaamaha iyo fikradaha. Sidan oo kale waxay noqonayaan isku duubni midaysan.
Noqo mid caalami ah Xusuusnow in naqshadeynta aan adiga loogu talagalin. Tan waxaa ku jira sawirro ballaadhan oo qof kastaa fahmi karo oo fahmi karo. Adigu waxaad aadeysaa cajiinka, ha ilaawin.
Qandaraas iyo gooni Waa hab loo kala qoondeeyo oo loo dalbado qoraalka iyo booska. Ugu dambeyntiina, waa kala-dambayn, wax-qabad iyo nadaafad weeye waxyaabaha lagama maarmaanka u ah.
Waxay u qaybisaa iftiinka iyo gudcurka: Waxay ku saabsan tahay abuuritaanka isku dheelitirnaanta heerar kasta. Tan waxaa kale oo ku jira daaweynta iftiinka oo na siin kara dhismayaal cusub iyo goobo macluumaad.
Go'aamiso oo ku samee hadafyada. Ugu dambeyntiina, waxay ku saabsan tahay dhammaan dadaalkeenna oo aan ku soo wada ururinno hal xirmo. Sidan oo kale wax waliba macno ayey yeelan doonaan waxayna yeelan doonaan dhidib.
Ku cabir indhahaaga: Naqshadeynta waa muuqaal. Adeegsiga ciyaaraha indhaha iyo abuurista dhalanteedyada indhaha ayaa ikhtiyaar u noqon kara, dhammaantood waxay kuxiranyihiin nooca mashruucaagu yahay. Isku day inaad sameysid wax indhahaaga cajabin kara.
Asal ahaaw, ha isticmaalin qaaciidooyinka. Maalmahan guurinta iyo otomatiga geedi socodka hal-abuurnimadu aad ayey u fududahay sababtoo ah marin u helka aan u leenahay dhammaan noocyada maaddooyinka ah. Ka fogow inaad ku dhacdo khaladkan, samee wax ka yimaada gudaha. Waxay saameyn ku yeelan kartaa fanaaniinta kale ama shaqooyinka laakiin waa inay kujiraan shaambadaada.
Iska ilow waxa moodada ah. Naqshadeynta ayaa ah mid sii socota oo dhiirrigelisa serialization ee alaabada iyo mashaariicda.
Dhaqaaq dhaqaaq, ma guurto ah waa caajis. Waxaa lama huraan ah inaad taqaanno sharciyada isku-darka iskuna day inaad u adeegsato si faa iidadaada ah.
Dib u eeg sheekada laakiin ha koobiyeyn: U fiirso, booqo, akhri oo caleenta. Taasi waxay had iyo jeer u roonaan doontaa kartidaada waxaadnaheli doontaa taariikh weyn.
Symmetry waa xumaanta ugu dambeysa. Waa inaan aqoonsanno inay tani aad isugu dhowdahay, laakiin xaalado badan iskumidnimadu waxay la mid tahay istaatistikada, waa wax aan dooneyno inaan iska ilaalino qiima kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 20 talooyin oo ku saabsan qaabeynta xayeysiin wanaagsan
Pantone wuxuu magacaabaa laba midab sida midabka sanadka 2016